မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 10/01/2009 - 11/01/2009
Posted by mabaydar at 1:55 PM 8 comments :
ကြည့်ပြီးတာတော့ ကြာပါပြီ... တော်တော်များများတောင် ကြည့်ပြီးလောက်ပြီ... 2005 လောက်ထဲက ထွက်တဲ့ ကားပါ... ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်သေးတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ... ဒါပေမဲ့ ကြိုက်လို့ ရေးအုံးမယ်... သိပ္ပံဇာတ်လမ်း သည်းထိပ်ရင်ဖို Action ကားလေးပါ...Ewan McGregor နဲ့ Scarlett Johansson တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတဲ့ The Island ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားပါ... ဇာတ်လမ်းက ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းတော့ ရှည်မယ်... ဒါပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်...
အချိန်ကား ၂၀၁၉ ခုနှစ်ပါ... လင်ကွန် ဆစ် အဲကို (Lincoln Six Echo) နဲ့ ဂျော်ဒန် တူး ဒယ်လ်တာ (Jordan Two Delta) တို့ဟာ ညစ်ညမ်းမှုကင်းတဲ့ လူသားအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက လူသား၂ဦးပါ... သူတို့ နေထိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို အုပ်ချုပ်သူကတော့ Dr. Merrick ဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်... သူတို့ ဟာ စတင် မွေးလာတည်းက တင်းကြပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ နေရပြီး သူတို့ကို ထားတဲ့ အဆောက်အအုံကြီးရဲ့ အပြင်ကိုလဲ တစ်ခါမှ မထွက်ဖူးပါဘူး... အပြင်ထွက်ရင် ညစ်ညမ်းသွားမယ်လို့ သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူက ခြောက်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ သူတို့စိတ်ထဲမှာ စွဲနေခဲ့ပါတယ်... သူတို့ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဟင်းပမာဏပဲစားရတယ်... အားကစားတွေပုံမှန်လုပ်ရတယ်... အဖြူရောင် ၀တ်စုံဆင်တူကို ၀တ်ရတယ်... ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပိုက်လိုင်းတွေကို ဆေးထိုးတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်... ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အပြုအမူကို အမြဲ စောင့်ကြည့်နေခြင်းခံရတယ်... သူတို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကတော့ ညစ်ညမ်းမှုတွေကင်းပြီးနေထိုင်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘယ်နေရာမှန်းလဲ သေချာမသိတဲ့ The Island ဆိုတဲ့ နေရာကို သွားရဖို့ ပေါက်မဲကိုပဲ အမြဲမျှော်လင့်နေကြရတယ်... The Island ကို သွားရဖို့ မဲပေါက်တဲ့ သူက သူတို့ထဲမှာ ကံကောင်းတဲ့လူဆိုပြီး အမြဲအားကျခံရတယ်...
လင်ကွန်ဟာ တခြားသူတွေနဲ့ အတူအလုပ်လုပ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ သူ့အတွေးအခေါ်တွေက တခြားသူတွေအလယ်မှာ တမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်... သူ့မှာ မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်... သူ့မှာ သူတို့လို the Island ကိုသွားဖို့ စောင့်နေတဲ့သူမဟုတ်ပဲ ကွန်စရက်ရှင်ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အပြင်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်... လင်ကွန်က တခြားသူတွေထက် အသိဥာဏ်ပိုရှိပြီး အမြဲစဉ်းစားနေတတ်တယ်... ဥပမာ.. ဘာကြောင့် ငါတို့က အဖြူချည်းပဲ ၀တ်ရတာလဲ... ငါတို့ တစ်နေ့တစ်နေ့ဆေးထိုနေတဲ့ ပိုက်လိုင်းတွေက ဘယ်ကိုသွားတာလဲ... ပြီးတော့ သူ့မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်တွေလဲ ခဏခဏမက်တယ်...
တစ်နေ့ သူခိုးသွားနေကျ ကွန်စရက်ရှင် ဧရိယာကနေ ထွက်ပေါက်တစ်ခုကို ရှာတွေ့သွားရာကနေ... The Island ဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားတယ်... The Island သွားဖို့ မဲပေါက်တဲ့ သူတို့ထဲက လူ၂ယောက်ကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ သတ်ပြီး Organ Harvesting လုပ်တာကို သူတွေ့သွားတဲ့အခါမှာ... သူ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ The Island သွားဖို့ လတ်တလောမှာမှ မဲပေါက်ထားတဲ့ Jordan Two Delta ကို အရမ်း စိုးရိမ်သွားခဲ့ပြီးနောက် သူတို့ ၂ယောက် ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်...
သူတို့ အပြင်လောကကိုရောက်သွားချိန်ကျတော့မှ... အပြင်လောကဟာ သူတို့ကို ခြောက်ထားသလို ညစ်ညမ်းမှုမရှိပဲ အသက်ရှင်သန်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်... ကွန်စရက်ရှင် အလုပ်သမား သူငယ်ချင်းရဲ့ ကူညီ ရှင်းပြချက်နဲ့ သူတို့ဟာ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေရဲ့ Clone တွေဆိုတာကို သိရှိခဲ့ရတယ်... Dr. Merrick ဟာ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ သူဋ္ဌေးတွေကို Clone လုပ်တယ်လို့ မပြောပဲ Organ တွေကို အပင်စိုက်သလို တစ်ခုချင်းစိုက်တယ်... သူတို့မှာ ဘာခံစားချက်မှ မရှိဘူးလို့ ညာခဲ့တယ်... အဲဒိအတွက်ကြောင့် သူတို့ ဒီလိုဒုက္ခကလွတ်အောင် သူတို့ရဲ့ Clone ပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေးတွေကို သွားရောက် အကြောင်းကြားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်...
သို့သော် သူတို့ Clone ပိုင်ရှင်တွေဟာ သူတို့ထင်ခဲ့သလို သူတို့ကို မကူညီခဲ့ပဲ ဖမ်းချုပ်ပြီး Dr. Merrick ထံ အကြောင်းကြားဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ.........
သူတို့၂ယောက်လွတ်မြောက်အောင် ဘယ်လို ရုံးကန်ခဲ့ကြသလဲ... ကိုယ့်ပိုင်ရှင် Clone ပိုင်ရှင်ကလဲ သူတို့ဘက်မပါ... Dr.Merrick ကလဲ စစ်တပ်လို ရှာဖွေရေးတပ်ကြီးနဲ့ သူတို့ကို ပိုက်စိတ်တိုက်ရှာနေတဲ့ကြားမှာ သူတို့ဘယ်လို လွတ်မြောက်ခဲ့ကြသလဲ... လူတွေဟာ ကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုရုံးကန်ခဲ့ကြသလဲ... ကျန်နေတဲ့ Clone ပေါင်းမြောက်များစွာကို သူတို့ဘယ်လို ကယ်တင်ခဲ့ကြသလဲ... ဆိုတာကို တစ်ကွက်မှ ပျင်းစရာမကောင်းအောင် ရိုက်ပြခဲ့ပါတယ်... ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှူစားပါ... (ရှုစားပြီးသော သူများလဲ ထပ်ရှုစားပါ... လင့်တော့မမေးပါနဲ့.. ကိုယ်တောင် သူများဒေါင်းလုပ်လုပ်လာတာကို အလကား ၀င်ကြည့်တာပါ... ဟတ်... ဟတ်)
(ခုချိန်ကစပြီး Spoiler တွေစပါတော့မယ်... Spoiler မကြိုက်သူများ ဆက်မဖတ်ကြပါရန်...)
ဒီကားကို ကြည့်ပြီး သဘာဝကို လွန်ဆန်ပြီး Clone လုပ်တာဟာ မကောင်းဘူး လို့ မြင်မိတယ်...
အသက်တစ်ချောင်းကို အသက်လို့ မသတ်မှတ်ပဲ Clone လုပ်လို့ ဖြစ်လာရတဲ့ သွေးသားနဲ့ လူတွေကို Product တွေလို့ သဘောထားပြီး သုံးနှုန်းထားတာကိုကြည့်ပြီး အတော်လေး ဂရုဏာသက်မိတယ်...
လူကနေ မွေးထားတဲ့ တကယ့်လူအစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်... Clone ကနေ ဖြစ်လာတဲ့ လူပဲဖြစ်ဖြစ်.. ခံစားတတ်တဲ့ သွေးသားနဲ့မို့ သူတို့ဟာလဲ လူတွေပဲ... အဲဒိအတွက် အားလုံးဟာ ကိုယ် အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြတယ်...
လူ့လောကအကြောင်း ဘာမှ မသိသေးတဲ့ Clone က အားကိုးတကြီး သူ့ Clone ပိုင်ရှင်ဆီသွားတော့ သူထင်သလို ဖြစ်မလာပဲ အလိမ်ခံရပုံ... ပြီးတော့ သူတို့ ၂ယောက်ကို ဘယ်သူ အတုအစစ်မှန်းခွဲမရတဲ့ အချိန်မှာ ၂ယောက်လုံးက အသက်ရှင်ဖို့ကို ရုံးကန်ကြပုံက သင်ခန်းစာရစရာကောင်းတယ်... ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်သန်ချင်ကြတာပဲလေ...
နောက်ပြီး နောက်ဆုံးခန်းနားမှာ သူတို့ကို လိုက်ဖမ်းနေတဲ့ တပ်ထဲက ကပ္ပလီကြီးက မင်းသမီးလက်က အပူနဲ့ကပ်ပြီး အမှတ်အသားလုပ်ထားတဲ့ အမာရွတ်ကိုတွေ့တော့ သူ့ငယ်ဘ၀တုန်းကလို လူကို လူလို့သတ်မှတ်မခံခဲ့ရပဲ အမှတ်အသားလုပ်ခံခဲ့ရတာနဲ့ သွားကိုယ်ချင်းစာမိပြီး သူတို့ဘက်ပါသွားခဲ့တယ်... ဒါကိုကြည့်ပြီး လောကမှာ လူဆန်ခြင်းဆိုတဲ့ ခံစာချက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆိုတာ ရှိသင့်တယ်လို့ထင်တယ်...
အဲဒိကားမှာ ကြိုက်တဲ့ Dialog တွေရှိတယ်...
မင်းသားက သူ့ရဲ့ ၁ဦးတည်းသော လူသူငယ်ချင်း Mac နဲ့ စကားပြောတဲ့အခန်းမှာ...
Mac က god ဆိုတဲ့ စာလုံးကို စကားမှာပြောရင်းပါသွားတော့..
မင်းသားက "what's God?" လို့မေးတယ်...
Mac ပြန်ဖြေပုံက ရီရတယ်... " Well, you know when u want something really bad and u close your eyes and wish for it? God's the guy that ignores you." ဟား.. ဟား...
သူတို့ ၂ယောက်ထွက်ပြေးလွတ်လာပြီး Mac ဆီရောက်လာကြတယ်...
အဲဒိလူက သူတို့ဟာ clone တွေဖြစ်ကြောင်းပြောတော့...
မင်းသမီးက သူ့ ငယ်ဘ၀ကို သူသိကြောင်း ပြန်ငြင်းတဲ့အခါမှာ... မင်းတို့ဟာ Memory Imprint လုပ်ခံထားရကြောင်း Mac က ပြန်ရှင်းပြလိုက်တော့ သူ့ကို မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး Clone ၂ယောက်က စိတ်ပျက်တဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်ကြတယ်... အဲဒိအခါ သူပြောလိုက်ပုံက...
"Don't look at me like that... At least U have bike.. Wanna trade your rosy memory implants for my shity Childhood, Be my guest"
"Why doesn't Merrick want our owners to know that we are alive?" ဆိုတော့...
Mac ရဲ့ အဖြေက ထိထိမိမိနဲ့ ရှင်းတယ်... "Just because people wanna eat burger,doesn't mean they wanna meet the cow" .... ဟား.. ဟား.. ရှင်းတယ်နော်..
ဒီကားဟာ ဟိုးအရင်က ရုပ်ရှင် the Clonus Horror ဆိုတာနဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင်ပုံချင်း တစ်ပုံစံတည်းတူနေတဲ့အတွက် Copy Right နဲ့ ညိပြီး တရားစွဲခြင်းခံခဲ့ရသေးတယ်... ၁ million doller လျှော်လိုက်ရတယ်ကြားတယ်... ကုန်ကျစားရိတ် $126 million ဖြစ်ခဲ့ပြီး.. United State Box office မှာ $36 million ပဲရခဲ့တယ်...ဒါပေမဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပြသခဲ့တော့ $163 Million ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်... (source from Wiki)
Posted by mabaydar at 4:56 AM7comments :
Photo Credits http://www.quotesarcade.com/graphics/friendship/friendship_quotes_graphics_b5.gif
မြစ်လို့သာခေါ်တယ် ရေငံတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ရေသေမြစ်ကြီးကို ငေးမောရင်း မရည်ရွယ်ပဲ သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို ရှိုက်လိုက်မိတယ်... သြော် စဉ်းစားကြည့်တော့လဲ... ဒီကိုရောက်လာကတည်းက အချိန်အခါမရှိပဲ ရွာတတ်တဲ့ ကွက်ကြားမိုးရယ်... ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေသလားလို့ ထင်ရလောက်တဲ့ မိုးခြိမ်းသံတွေရယ်... အနှစ်သာရမရှိတဲ့ မြှောက်ပင့်စကားတွေရယ်... မျက်နှာဖုံးပေါ်က ခပ်ပေါ့ပေါ့အပြုံးတွေရယ်... သူဘယ်သူလဲဆိုတာထက် သူဘာကောင်လဲ သူ့ဆီကဘာအကျိုးအမြတ်ရနိုင်လဲ ဆိုတဲ့ အကြည့်တွေရယ်... အို.. နောက်ဆုံး သစ္စာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ပိတောက်တွေတောင် မိုးရွာပြီးတိုင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပွင့်နေကြလေရဲ့... ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာ အတော်ကြာပြီပေါ့... ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတွေ တတ်ထားတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေဟာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ဆုရသွားတဲ့ မင်းသမီးထက်တောင် သရုပ်ဆောင်ပိုကောင်းလွန်းနေတော့ ကျမဝေခွဲရခက်ခဲ့တယ်... ဘယ်သူအစစ်လဲ ဘယ်သူအတုလဲလို့ ဝေခွဲရအောင် ကျမကိုယ်တိုင်ရော စစ်သေးရဲ့လား...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ။ ~~~~~~~~~~~~~~~
ဘယ်ကျောင်းနဲ့မှ မတူတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်သံဟာ ကျမတို့ ကျောင်းသားချင်းတွေအတွက်တော့ စကားဝှက်လေးတစ်ခုလို ကွဲပြားနေစေခဲ့ပါတယ်... ဒီနှုတ်ဆက်သံလေးကို ကြားတာနဲ့ ဒါငါတို့ကျောင်းက ကျောင်းသားပဲလို့ သိသာထင်ရှားစေပါတယ်... နောက်ပြီး တခြားကျောင်းတွေလို အတော် အညံ့မခွဲပဲ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီအတိုင်း ဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူငယ်တန်းက ၁၀ တန်းထိ ၁၁ နှစ်လုံးလုံးပြန်တွေ့ခွင့်ရတာလဲ ကျမတို့ကျောင်းပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်... ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စာပေမှာ အားနည်းတဲ့လူနဲ့ အားကောင်းတဲ့ သူကို ခွဲထားလိုက်ရင် အားနည်းသူက နည်းသထက်နည်းလာမှာ စိုးတဲ့အတွက်ပါ... ဒါကြောင့် တော်တဲ့သူက ညံ့တဲ့သူကို တပါတည်းဆွဲခေါ်နိုင်စေရန်အတွက် ရောထားခြင်းဖြစ်မယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်...
ယောကျာင်္းလေး မိန်းကလေးရောတဲ့ တစ်နေကုန်ကျောင်းဖြစ်တာကြောင့် နှစ်တွေ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိပြီး တကယ်ကို မောင်နှမတွေလိုပဲ ရင်းနှီးမှုတွေလဲ ပိုခဲ့ကြပါတယ်... မနက် ကိုးနာရီ ၁၅ ကျောင်းခေါင်းလောင်းထိုးချိန်မှာ တူတူဘုရားရှိခိုးခဲ့ကြတယ်... စာသင်ချိန်မှာ တူတူ စာသင်ခဲ့ကြတယ်... စာမေးချိန်မှာ တူတူရင်ခုန်ခဲ့ကြတယ်... ထမင်းစားချိန်မှာ တူတူထမင်းစားခဲ့ကြတယ်... ညနေ ကျောင်းဆင်းချိန် ၃နာရီ ၁၅ မှာ တူတူ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်.. (ဒီနေရာမှာ တူတူဆိုတာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်ချက်တူတာကို ပြောတာဖြစ်ပြီး... တစ်စားပွဲတည်း ထမင်းစားတယ်... တစ်စားပွဲတည်းစာကျက်တယ်... တစ်လမ်းတည်း အိမ်ပြန်တယ်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ...)
လူပေါင်း ၈၀ ကျော်ရှိတဲ့ ကျမတို့ အတန်းထဲမှာ လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးပေါင်းသင်းမနေဖြစ်ခဲ့ပင်မဲ့ ဘယ်သူဟာ ဘယ်လိုအကျင့်ရှိလဲ ဆိုတာ ငယ်ငယ်ထဲက တူတူကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက် ဘယ်သူနဲ့မှ စိမ်းတယ်ရယ်လို့မရှိခဲ့ပါဘူး... ကျမတို့ စာသင်နှစ်မှာ ကျမတို့က ထိပ်ဆုံးတန်း အေခန်းဆိုပေမဲ့... တခြားအတန်းတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အမြဲ ဘိတ်ရလို့ ဆရာမတိုင်းအော့ကျောလန်အတန်းလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... ရန်ဖြစ်ပြီလားဟေ့ဆိုလဲ ကျမတို့အတန်းပဲ... စာမေးပွဲအမှတ်ထွက်လို့ အမှတ်ပေါင်းတွေ ယှဉ်လိုက်လဲ ကျမတို့အတန်းက အနည်းဆုံးပဲ... ညနေသူများအတန်းတွေ ကျောင်းဆင်းလို့ တစ်တန်းလုံး ခုံပေါ်တက်လက်မြှောက်နေရတယ်ဆိုလဲ ကျမတို့အတန်းပါပဲ... ဒါပေမဲ့လေ ပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ဒီအတန်းထဲမှာနေခဲ့ရလို့ ကျမဘယ်တုန်းကမှ နောင်တမရခဲ့ပါဘူး... ဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံခဲ့ရတဲ့ ဒီကျောင်းခန်းဟာ ကျမအတွက်တော့ အမှတ်ရစရာတွေ အများကြီးပဲပေါ့...
ဘာပဲပြောပြော ဒီအတန်းထဲမှာ မျက်နှာဖုံးပေါ်က အပြုံးတွေမရှိခဲ့ဘူး... မုသားတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ မြှောက်ပင့်စကားတွေ မရှိခဲ့ဘူး... ပကတိရိုးသားတဲ့ ခင်မင်မှုတွေပဲ ရှိခဲ့တယ်... အော်... လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်ကာလ တုန်းကအထိပေါ့...................
~~~~~~~~~~~~~ ။ ~~~~~~~~~~~~
Facebook က inbox ထဲမှာ message ရောက်နေတာတွေ့တော့ နည်းနည်းအံ့သြသွားတယ်... ဒါနဲ့ အမြန်ဖွင့်ဖတ်ကြည့်မိတယ်... ငယ်ငယ်က အတန်းထဲက သူငယ်ချင်း xxxxxx ဖြစ်နေတယ်... သူက ကိုယ်ပိုင် website ရှိလို့ ရှားရှားပါးပါး အဆက်သွယ်ပြန်ရထားတဲ့ ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းပေါ့... ရန်ကုန်က ဆေးကျောင်းရသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတချို့နဲ့တော့ အွန်လိုင်းမှာ ပြန်တွေ့ပင်မဲ့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်မအားကြတာနဲ့ အွန်လိုင်းရှိတယ်သာ ကြည့်ပြီး မချက်ဖြစ်ကြပါဘူး...
ဒီတစ်ခါတော့ Message ထဲမှာ သူငယ်ချင်းက သူ အင်္ဂလန်ကိုအပြန်မှာ စကာင်္ပူကို ၀င်ပြီး အေ ခန်းက စကာင်္ပူရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို စုပြီး Gathering လေးလုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်... ကျမအပြင် သူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရနေတဲ့ တခြား အေ ခန်းက ယောကျာင်္းလေးတွေရှိတယ်တဲ့... ကျမလဲ သိတဲ့သူရှိရင် ခေါ်ခဲ့ပါတဲ့... ဒါဟာ ၈နှစ်အတွင်းမှာ ပထမဆုံး ကျမတို့ ပြန်ဆုံရခြင်းပေါ့....
အဲဒိနေ့က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရမှာမို့ အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေမိတယ်... ငယ်ငယ်က အတန်းထဲမှာ စကားလေးလုံးကွဲအောင်တောင် မပြောဖူးပေမဲ့ ဘယ်သူက ဘာအကျင့်ရှိတယ်... ဘယ်လိုဆိုတာတော့ မေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး... ပြန်တွေ့ရင် မှတ်မိပါ့မလားလို့လဲ စိုးရိမ်စိတ်ပိုခဲ့မိပါတယ်... ဖုန်းစကားပြောကြည့်တော့ ဖုန်းထဲက အသံတွေကတော့ ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိလှပါတယ်... အေ ခန်းက မိန်းကလေး ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျမနဲ့ ကျမရဲ့သူငယ်ချင်း ချိန်းပြီး သူတို့နဲ့ ချိန်းထားတဲ့ Raffle city က Starbuck ကော်ဖီဆိုင်ကို ရောက်တော့ ထင်မထားတဲ့ အတန်းဖော်တွေကိုပါ တွေ့လိုက်ရပါတယ်... တချို့လဲ ၀လာတယ်... တချို့လဲ အရပ်တွေရှည်လာတယ်... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မပြောင်းလဲတာကတော့ အားလုံးရဲ့ ပကတိရိုးသားတဲ့ အပြုံးတွေပါပဲ...
အဲဒိနေ့က ထူးထူးခြားခြား စကာင်္ပူမှာ နေတာသာ ကြာတယ် ကျမတစ်ခါမှ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်... ပထမဆုံး ကျမတို့နေ့လည်စာစားရင်း ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောကြတယ်... လတ်တလော အခြေအနေတွေကို မေးကြတယ်... ငယ်ငယ်ကလို ဘာစာတွေရပြီလဲဆိုတဲ့ topic ကနေ ခုတော့ ဘာအလုပ်လုပ်နေလဲ... ဘယ်သူတွေကတော့ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီလဲ ဆိုတဲ့ Topic တွေဖြစ်လာလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသက်ကြီးလာပြီဆိုတာတော့ သတိထားလိုက်မိသေးတယ်... နောက်တော့ explanade ဘက်သွားမယ်ဆိုပြီး တိုက်စီပေါ်ရောက်မှ အင်္ဂလန်သားက Singapore Flyer ကြီး စီးရအောင်ဆိုလို့ အားလုံး စိတ်တူကိုယ်တူ စီးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်... စကာင်္ပူမှာ နေနေတဲ့ ကျမတို့အားလုံးကိုမေးကြည့်တော့ ကျမအပါအ၀င် တစ်ယောက်မှ မစီးဖူးကြဘူး... ဒီလိုနဲ့ Singpore flyer ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံကို ၈နှစ်ကြာ ကွဲကွာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တယ်...
နောက်... explanade ဘက်ကို လမ်းလျှောက်ရင်း တခါမှ ထိုင်မကြည့်ဖူးတဲ့ အဲဒိက evening Free show ကိုလဲ သူတို့နဲ့ ထိုင်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်... အမှတ်အရဆုံးကတော့ တစ်ခါမှ မစီးဖူးတဲ့... စီးဖို့လဲ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဖူးတဲ့... Singapore River ထဲက မော်တော်ဘုတ်ကို အင်္ဂလန်သားရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်စည်းရင်း အားလုံး တပျော်တပါးစည်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်... စီးကြည့်တော့လဲ မဆိုးပါဘူး... မော်တော်ထဲက အမြင်ကတော့ ခါတိုင်း မြင်နေကျထက် တစ်မျိုးတော့ ဆန်းပါတယ်... ဘာပဲပြောပြော ကျမ ဒီအရာတွေကို တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတာ သူတို့နဲ့ အမှတ်တရဖြစ်ဖို့ တမင်ချန်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျမရဲ့ မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ထင်ကျန်နေအုံးတော့မှာပါ...
အချိန်မလောက်တဲ့အတွက် ဆန်တိုဇာ East Coast လိုက်ပို့ပေးချင်ပင်မဲ့ ဒီမှာတင်ရပ်ပြီး အားလုံး စီးတီးဟော ပင်နီဇူလာပလာဇာရှေ့မှာ လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်... ထမင်းဘယ်မှာစားမလဲ တိုင်ပင်နေတာနဲ့တင် အင်္ဂလန်က သူငယ်ချင်းကိုတောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် goodbye မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး... ဒါလဲကောင်းပါတယ်... Goodbye ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်လို့ နောက်ပြန်မတွေ့မဲ့သူတွေမှ မဟုတ်တာ... ဒီလိုပဲ ယုံကြည်ထားတယ်... ကျမတို့ အမှတ်ရနေသ၍ အမြဲနီးစပ်နေမဲ့ ပတ်သတ်မှုတစ်ခုပဲမဟုတ်လား...
ဒီလိုနဲ့ နောက်ရက်တွေမှာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်... ကိုယ့်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပြန်သွားကြပင်မဲ့... လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်ကလို အဆက်သွယ် မပြတ်ရလေအောင် Facebook မှာ ကျမတို့ အတန်းအတွက် သီးသန့် Group လေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာရောက်နေတဲ့ အေခန်းက သူငယ်ချင်းတွေအတွက် စုံစည်းရာလေးတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့တယ်... Facebook ကျေးဇူးကြောင့်ပဲ နောက်ထပ် နောက်ထပ် အဆက်သွယ်ပြတ်နေခဲ့တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့ အဆက်သွယ်ပြန်ရခဲ့တယ်... ခုဆို မန်ဘာ ၃၄ ယောက်ရှိတဲ့ ကျမတို့ အဖွဲ့လေးဟာ အတော်လေးစိုပြေနေလေရဲ့... ဘယ်သူမှ မသိအောင် ဖွင့်ထားတဲ့ ကျမရဲ့ မဗေဒါဘလော့လေးကိုလဲ ခုဆို အားလုံးသိကုန်ကြလေရဲ့... စကာင်္ပူရောက် အေတန်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တော့ ခဏခဏတွေ့ဖြစ်သေးလေရဲ့...
~~~~~~~~~~~ ။ ~~~~~~~~~
ရေငံတွေပြည့်နေတဲ့ ရေသေစကာင်္ပူမြစ်ကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း ကျမမျက်နှာပေါ် အပြုံး တစ်ချက်ပွင့်သွားခဲ့တယ်... ဘေးလူတွေ မမြင်အောင် အမြန်ပြန်သိမ်းလိုက်ပင်မဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ပေ့ါပါးလန်းဆန်းနေတယ်... သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြား လူမှုရေးဆိုတာအတွက် ကျမလဲ လိုက်သရုပ်ဆောင်နေရပင်မဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်... အရင်က ငါများတစ်ခုခုမှားနေလို့ လူတွေကငါ့ကို အစစ်အမှန်မဆက်ဆံကြတာလားဆိုပြီး လောကကြီးနဲ့ အံချော်နေခဲ့ပင်မဲ့... ဒီငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့တိုင်းတော့ ကျမအစစ်ကို ကျမရှာတွေ့ခဲ့တယ်...
၈နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပင်မဲ့ ကျမကို မှတ်မိပေးနေတဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ချင်တယ်...
တကယ်တော့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ လေပြေလိုပါပဲ... လေကို အမြဲရှူသွင်းနေချိန်မှာ သတိမထားမိခဲ့ပင်မဲ့ လေမရှိတော့တဲ့အခါမှ အသက်ဆက်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းမရှိသလိုပါပဲ... ငယ်ငယ်က သူတို့နဲ့ တူတူရှိခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ တန်ဖိုးမထားမိပင်မဲ့ သူတို့နဲ့ ဝေးခဲ့ပြီး ဘ၀လမ်းကို တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်နေချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ တည်ရှိမှုဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ကျမ စတင် သဘောပေါက်သွားတဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ဟာ အမှတ်ရစရာနေ့လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...
(Friends are like the air. You didn't notice when they are around but you can't live without them. So Value every moment and enjoy when you are with your friends. Grab every chances to meet with them)
P.S မမယ်ကိုး အကြံပေးချက်အရ သူငယ်ချင်းသည်လေပြေ လို့ ပိုစ့်လေးကို နာမည်တတ်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Posted by mabaydar at 5:46 AM 12 comments :
Labels: Activities , သူငယ်ချင်းများ
ခုတစ်လော ဘာဖြစ်လို့မှန်းတော့မသိဘူး ဒီ "(လျှပ်စစ်)မီး" နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ခဏ ခဏကြုံရတဲ့ အဖြစ်လေးတွေရှိတယ်... ဒီလိုကြုံရကြားရတော့ ရီလဲရီချင်တယ်... သေချာပြန်စဉ်းစားမိတော့လဲ ဂရုဏာသက်မိတယ်... အားတုံ့ အားနာဖြစ်မိတယ်... ပြောပြရအုံးမယ်... အကြောင်းက ဒီလို...
ဒီနေ့ အိမ်ကို ရန်ကုန်က ဧည့်သည်လင်မယား ၂ယောက် ရောက်လာတယ်... အိမ်မှာ တည်းမှာဆိုတော့ လေယာဉ်ကွင်းက ဆင်းတာနဲ့ အိမ်ကို ရောက်လာတာပေါ့... မိန်းမကတော့ စကာင်္ပူကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး... ယောကျာင်္းကတော့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်တဲ့... သူတို့ရောက်တဲ့အချိန် ကိုယ်ကလဲ ညဘက်အလုပ်လုပ်ရတော့ နေ့ဘက်အိပ်ရတယ်လေ... နေ့ဘက်အိပ်တော့ အခန်းတွေကို နေရောင်မ၀င်အောင် ပြတင်းပေါက်တွေပိတ် လိုက်ကာတွေချပြီးအိပ်နေတာပေါ့... ဒါနဲ့ သူတို့လာတော့ တံခါးဖွင့်ပေး နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီး စကားပြောနေတုန်းရှိသေးတယ်...
အဲဒိ အမျိုးသမီးက ရုတ်တရက် တစ်ခုထမေးလိုက်တာ ကျမအတော်ကြောင်သွားတယ်...
"သမီး... မီးလာလား?" တဲ့...
ကျမ အခုလိုမေးခံလိုက်ရတော့ ဘာတောင် ပြန်ဖြေရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်... ဘာကို မေးတာမှန်းလဲ ကျမ ချက်ချင်းမသိဘူး...
ဒါနဲ့ ကျမလဲ.. "ရှင်???... ဒီအိမ်??... စကာင်္ပူကို ပြောတာလား?" လို့ ပြောတော့ ...
ဟုတ်တယ်တဲ့... ကျမလဲ တအံ့တသြဖြစ်နေတဲ့ပုံနဲ့ပဲ ကြောင်စီစီပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်... တကယ်ပါ အဲလိုမျိုး တစ်ခါမှ အမေးမခံခဲ့ရဖူးတော့ ခဏတာမျှ ကြောင်သွားတာပါ... "ဟုတ်ကဲ့.. မီးလာပါတယ်" လို့ပြောပြီး.. ပန်ကာတွေဖွင့်.. ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့် ချက်ချင်းလုပ်ပေးလိုက်ရတယ်.... ကဲ... ကြည့်ရတာ.. မြန်မာပြည်သူတွေ စိတ်ထဲမှာ မီးဆိုတာ လာစရာမဟုတ်ဘူးလို့ အရိုးစွဲနေပုံရပါတယ်...
ဒီ မီး နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်လောက်ကလဲ အလုပ်ထဲက မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောကြတော့... သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မြန်မာပြည်မှာ ကလေးပြန်မွေးတယ်တဲ့... ကလေးက သူတို့ကို အကျိုးပေးတယ်တဲ့... ကလေးမွေးတဲ့ အချိန်မှာ ၁ပတ်လုံး မီးလာတယ်တဲ့... ရော.......... ဒွတ်ခ...
ဒါဆိုရင် ကျမကို မွေးခဲ့တုန်းကလဲ ကျမမိဘတွေတင်မကဘူး တစ်နိုင်ငံလုံးကို အတော်အကျိုးပေးခဲ့တာပဲနော် (အဲဒိခေတ်တုန်းက ရေမှန် မီးမှန်သေးတယ်လေ)... အဟတ်ဟတ်...
အရင်က ကလေးမွေးတဲ့အချိန် ထီပေါက်တာတို့ လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေပြီး ငွေရွှင်တာတို့ဆိုမှ ဒီကလေးက အကျိုးပေးလိုက်တာလို့ ပြောကြလေ့ရှိတာပါ... ခုတော့ မီး ၁ပတ်လာတာ ကလေးအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောနေရတယ်ဆိုတော့ မီးလာတယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ miracle ဖြစ်သလိုဖြစ်နေပြီထင်တယ်....
ဒီလိုနဲ့ ဒီနေ့ အိမ်မှာအတူနေတဲ့ အခန်းဖော်နဲ့ အဲဒိ မီးအကြောင်းပြောဖြစ်ကြတော့ သူကလဲ သူ့အဖြစ်လေးတစ်ခုကို ပြောပြတယ်... သူစကာင်္ပူရောက်စက အခန်းထဲမှာ မီးဖွင့်ဖို့မေ့ပြီး အမှောင်ထဲမှာနေနေမိတယ်... မှောင်လိုက်တာလို့ စိတ်ထဲမှာထင်တော့လဲ ဦးနှောက်က သူ့အလိုလို အသိပေးတာက... မီးပျက်နေတာ ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့... ဒီလိုနဲ့ အမှောင်ထဲမှာ အတန်ကြာနေလိုက်သေးတယ်ဆိုပဲ... နောက်မှ စကာင်္ပူမှာ မီးမှ မပျက်တာဆိုပြီး သတိရသွားတော့မှပဲ မီးဖွင့်ကြည့်မိတော့တယ်တဲ့... အဟုတ်... ဖြစ်ရပ်မှန်နော်... မထူးဆန်းဘူးလား...
အမှန်တော့ ကျမတို့တွေ အခွန်အခတွေပေးနေသ၍ မီးဆိုတာ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ၂၄နာရီ လာနေသင့်တာပါ... ခုတော့ အားလုံးရဲ့အတွေးထဲမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မီး ၂၄ နာရီမလာတာကို အရင်လိုတောင် ညီးငြူစရာလို့မထင်တော့ပဲ တစ်ရက်မှာ ၆ နာရီပြည့်အောင်လာရင်ကိုပဲ ကျေနပ်ပြီး ကျေးဇူးတွေတင်လို့... တစ်ခါတစ်ခါ စဉ်းစားမိတယ်... ဘုရားဟောတဲ့ ရောင့်ရဲတင်းတိန် မင်္ဂလာဆိုတာ ဒါမျိုးအတွက်ထားသင့်သလားလို့...
မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မီးမလာတာကို အဆန်းမဟုတ်တော့သလို... မီးဆိုတာ လာစရာမဟုတ်တော့သလိုတောင် အရိုးစွဲနေတာလဲ မပြောနဲ့... ဒီနေ့ပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Youtube ကနေ ဟိုးအရင်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ "သရဲလေးကောင်နှင့် ကျွန်တော်" ဆိုတဲ့ ပြဇာတ်လေးကို သွားကြည့်မိတော့... အဲဒိတုန်းကတည်းက မီးမလာ ရေမရတာကို ဟာသတွေထဲမှာ ထည့်ပြောထားတယ်... အဲဒိပြဇာတ်က ဘယ်နှခုနှစ်က ဟာလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး... ဒါပေသိ လွင်မိုးဆိုတာလဲ ငယ်ငယ်လေး... မေသဉ္ဖာဦးဆို ခု အမေခန်းတွေပဲရိုက်နေရပြီ... အရိုင်း ကင်းကောင် ငှက်ပျော်ကြော် ဖိုးဖြူ ကုသိုလ် အားလုံ အခုနဲ့ ယှဉ်ရင် အတော်ငယ်သေးတယ်... ဦးသန်းဖေလေးကြီးဆိုရင် ဆုံးသွားတာတောင် အတော်ကြာပေါ့... သင်္ခါရသဘောတရားကြီးက မီးမလာခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားကြီးကိုတော့ အန်မတုနိုင်ဘူးထင်ပါ့...
ဟို လွန်ခဲ့တဲ့ ဘယ်နှနှစ်ကလဲတော့မသိဘူး... စင်္ကာပူမှာ ပြည်သူတွေကို အသိပေးမကြေငြာထားပဲ ၅မိနစ်လောက် ညလယ်လောက်မှာ မီးပျက်တောက်သွားခဲ့ဖူးသေးတယ်... အဲဒိတုန်းက နောက်နေ့ မနက်ကျ ရောက်လာတဲ့ ကွန်ပလိမ်းတွေကို စကာင်္ပူ အစိုးရ အတော်ဖြေရှင်းလိုက်ရတယ်ဆိုပဲ... မီးပျက်တောက်မှုကြောင့် ၂၄နာရီအလုပ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေက စက်တွေလဲ ပိတ်သွားပြီး ဘယ်စက်ရုံကတော့ ဘယ်လောက် အရှုံးပေါ်သွားပါတယ်... ထွက်ကုန်တွေ နောက်ကျကုန်ပါတယ်ဆိုပြီး နောက်နေ့ သတင်းစာတွေထဲပါလာပြီး အတော်လေး ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်သွားသေး...
ခုလဲ ဒီပိုစ့်ကိုရေးတာ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှတော့ မရှိပါဘူး... ခုတစ်လော အဲဒိ မီးနဲ့ ပတ်သတ်တာလေးတွေက ကြုံကြိုက်နေတော့ ခံစားရတာလေးကို အချဉ်ထဖောက်လိုက်တာပါ...
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတာလေးတွေက တန်ဖိုးထားစရာပါလားလို့ မေ့လျော့နေခဲ့မိတယ်... ကျမလဲ လျှပ်စစ်မီးရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို မေ့လျော့နေခဲ့တာကြာပါပြီ... အင်တာနက် နှေးရင် service provider တွေကို ကြိမ်ဆဲရတာနဲ့... ဖုန်းဘေလ် ကိုယ့်ဘာသာကို ဆောင်တာနောက်ကျလို့ outgoing လေး ဖြတ်ခံရရင်ပဲ ချက်ချင်းဘေလ်ဆောင်ပြီး ၅ မိနစ်အတွင်း ဖုန်းပြန်မရရင် customer service ကို ခေါ်ပြီးကောရတာနဲ့... တကယ်တော့ စကာင်္ပူနိုင်ငံလေး သေးတာ... အလုပ်ပင်ပန်းတာ... မနက်ဆိုရင် အသုတ်မစားရတာ... ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး မရှိတာကို ငြီးတွားနေမဲ့အစား... ရှိတာလေးတွေကိုပဲ တန်ဖိုးထားတတ်ပြီး ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်နေရင် ကျမရဲ့ဘ၀ဟာ ကျေနပ်စရာပါပဲလား...
photo credits to http://exploreankit.files.wordpress.com/2007/05/lightbulb1.jpg
Posted by mabaydar at 4:05 AM 8 comments :